Leexo Picasa Photos in Photo Video Muqaal
> Resource > Talooyin > Sida loo soo celi Picasa Photos in Photo Video Muqaal
Hadda dad badan oo sawiro kala duwan digital ku kaydsan kombuyuutarada ay ku ururtay sanadihii la soo dhaafay in aan ninna weligii arag. In si aan ula wadaagno, abaabulo ama gurmad kuwa sawir xasuus, ay dooran karaan in ay geliyaan inta badan sawirada oo bilaash ah goobaha la wadaago sawir online sida Picasa . Si kastaba ha ahaatee, in badan oo inaga mid ah miyuu Salaax boqolaal sawirada, sida caadiga ah goobta la mid ah, kaliya xagal ka duwan, sababtoo ah waa lagu caajiso. Waa halka slideshow photo soo haan, oo kartaa in aad weli photos Picasa u soo nooleeya iyo isbeddel la taaban karo marka aad eegto kuwa photos Picasa mar kale.
Iyadoo qaar ka mid ah software slideshow photo, waxaad samayn kartaa sawir video slideshow ah tallaabooyinka wax yar uun, sida Picasa iyo gudahood DVD Muqaal dhise . Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo video duubey leh, kuwaas oo laba qalab.
Qeybta 1: Samee Photo Video duubey la Picasa 3
Qeybta 2: Ka dhig Photo Video duubey la DVD Muqaal dhise
Talaabada 1: Photos Select ka Picasa Photo Album
Orod Picasa, oo furo album sawirka oo ay ku jiraan sawiro aad rabto in aad soo qaado si aad u slideshow. Markaasaa sawirada la doortay ayaa la soo bandhigi doonaa saxaarad ee koonaha bidix ee hoose ee shaashadda.
Talaabada 2: In la abuuro Movie Muqaal la Picasa Photos
Riix icon filimka. Walxood movie CECAFA oo la siiyaa, mid hoos horyaalka galka, iyo ka weyn ah mid ka mid ah toolbar ah. Labada walxood leeyihiin shaqo la mid ah.
Talaabada 3: Calan iyo dheellitir Picasa Video Muqaal
Tag tab Movie ka dooro Style guurka iyo Duration dhibic ka hoos sanduuqyada. Jiid iyo hoos u photos si loo badalo amarada ay soo bandhigay in slideshow ah.
Picasa si toos ah durayo slide text bilowga soo bandhigeen magaca folder iyo taariikh. Waxaad sameyn kartaa font, xajmiga iyo midabka, ama ku darto qoraalada kuu gaar ah. Haddii aad rabto in aad ku darto slide qoraalka ah, guji image ah in aad rabto in aad hor slide qoraalka.
Haddii aad ku qanacsan tahay slideshow video ah, guji badhanka Abuur Movie u badbaadin. Marka aad dhamaysid, si aad u YouTube gali kartaa adiga oo Picasa video slideshow ah ee la wadaago.
Qeybta 2: Ka dhig Photo duubey la DVD Muqaal dhise
Picasa waa slideshow qalab sawir video weyn, waana lacag la'aan ah. Laakiin waxa aan kula kulmi kartaa shuruudaha kuwa ka sii daran oo ku saabsan kala guurka iyo saamaynta. Iyada oo taageero ka DVD Muqaal dhise , waxaad soo bandhigi kartaa sawirro aad si soo jiidasho iyo cajiib ah.
2D / 3D guurayso & saamaynta mooshinka la siiyaa (version Windows oo kaliya)
Hababka u diyaarsan in la isticmaalo movie ah ee munaasabad kasta oo la mid ah aroos, ilmaha, qoyska, fasax, si ay u sameeyaan slideshow la music , sawiro iyo videos ku qasabno.
Waxaa la dhisay-in qalab tafatirka in dalagga, isku shaandheyn ama sawiro filter sida Old Pictures, Wood, bedelka iyo ka badan.
Ku dar horyaal oo aamusnaan ah si ay u caawiyaan sheeg sheekooyin aad.
Ku dar iyo edit Cajalado leh qalabka dhisay-in.
1-riix si ay u gubaan muujinaya in DVD ah ee wadaagga ah ee TV, ama abuuro video si ay u wadaagaan on qalabka computer oo la qaadi karo.